October 2021 - ShwengweGames
လက်ထပ်တော့မည့် ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်၏ မျိုးပွားအင်္ဂါကို လေးခွနဲ့ပစ်ပြီး စမ်းသပ်သည့် အာဖရိကယဉ်ကျေးမှု့ ရုပ်သံ
October 31, 2021 by Shwengwe Games
ပရိသတ်ကြီးဆို့ရေ ဒီတခါမှာတော့ စာဖတ်သူတို့အဖို့ အာဖရိက ယဉ်ကျေးမှု တစ်မျိုးနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်။
အဲ့ဒါကတော့ ယောက်ျားလေးတစ်ယောက်ဟာ အရွယ်ရောက်လာလို့ မိန်းမယူတော့မယ်ဆိုရင်
သူလက်ထပ်ယူမည့် မိန်းခလေးရဲ့ဆွေမျိုးထဲက လူသုံးယောက်ကိုရွေးပြီး သူတို့တော်ရမဲ့ ယောဖဖြစ်သူရဲ့
ယောက်ျားလေး မျိုးပွားအင်္ဂါကို လောက်လေးခွနဲ့ သုံးကြိမ် ပစ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။
လောက်လေးခွနဲ့ သုံးကြိမ်ပစ်လိုက်တာကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေရင် သူတို့ရဲ့ နှမလေးနဲ့ ပေးစားပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ နှမလေး ပိုင်ဆိုင်ရမယ့် ဇိမ်ခံပစ္စည်းဟာ ကောင်းမကောင်း စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့သဘောပဲ ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။
အဲ့ဒီ ယဉ်ကျေးမှုကြီးက ယောက်ျားလေးတွေအတွက်တော့ တကယ့်ကို ထိပ်လန့်စရာကြီးပါနော်။
စာဖတ်သူ ပရိသတ်ကြီးတို့ဆိုရင်ရော ဒီလိုမျိုး အစမ်းသက် ခံနိုင်ပါ့မလား။မင်မင်ကတော့ တွေးကြည့်ယုံနဲ့တင် ကျောချမ်းလာတာပါနော်။
ပရိသတ်ကြီးတို့လည်း ကျန်းမာ၊ပျော်ရွှင်တဲ့ ဘဝရဲ့နေ့ရက်တွေကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ရပါတယ်နော်။C r d
အဖြူရောင် သတို့သမီး ဝတ်စုံလေးနဲ့ လှပနေတဲ့ အက်စတာ ရဲ့ အလှပုံရိပ်များ
ပရိသတ်ကြီးရေ အသက်ငယ်ပေမဲ့ အသံပါဝါအားကောင်းကောင်းနဲ့ Myanmar Idol မှာ Winner ဆုရှင်ဖြစ်တဲ့ အက်စတာကိုတော့ မှတ်မိကြအုံးမယ်ထင်ပါတယ်နော်.. သူမကတော့ ဆုရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှာလည်း ပရိသတ်နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်မသွား
စေဘဲ သူမရဲ့ သွားလာလှုပ်ရှားမှုလေးတွေကိုလည်း အဆက်မပြတ်တင်ပေးနေသူ ဖြစ်တာကြောင့်သူမကိုတော့ ပရိသတ်ကြီးက ခုချိန်ထိ မေ့မသွားသေးတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်နော်သူမကတော့ ပြိုင်ပွဲဝင်စဉ်က သူငယ်ချင်းတွေနဲ့လည်း အမြဲချစ်ချစ်ခင်ခင် ရှိနေတတ်
ကြောင်းကိုလည်း ပုံလေးတွေနဲ့ သက် သေပြနေတာ ဖြစ်ပါတယ်နော်…အက်စတာကတော့ သီချင်းနဲ့ပက်သက်လို့လည်း တစ်ကိုယ်တော်သီချင်းခွေ ထွက်ဖို့လည်း ကြိုးစားနေရင်းကနေပဲ မြန်မာပြည်မှာ အာဏာသိမ်းမှုဖြစ်သွားခဲံပြီး အနုပညာအလုပ်တွေ
အားလုံးလဲ ရပ်တန့်သွားခဲ့ တာ ဖြစ်ပါတာ်။ သူမက အနုပညာလမ်းကြောင်းပေါ်မှာ သီချင်းဘက်ကိုသာမက ကြော်ငြာတွေကိုပါ လက်ခံရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်ပါတယ်နော်….ဒီနေ့လေးမှာတော့ အက်စတာက ချစ်စရာကောင်းတဲ့ သတို့သမီးဝတ်စုံလေးနဲ့ ပုံလေးကိုတင်လာခဲ့ပြီး
” Photograper နဲ့ Make up အစွမ်းပေါင်းလိုက်တော့ ဒီလိုလေးထွက်လာတယ်ဆိုပြီး ” တင်လာခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်နော်.သူမတင်လာခဲ့တဲ့ ပုံလေးတွေအောက်မှာတော့ ချစ်စရာကောင်းတဲ့ ကောမန့်လေးတွေနဲ့ သူမကို
အားပေးပြီးချစ်ပေးထားကြပါတယ်နော်…ချစ်စရာကောင်းတဲ့ အက်စတာရဲ့ ပုံလေးတွေကို ကြည့်ပြီး ပရိသတ်ကြီးလည်း ချစ်ပေးကြပါအုံးနော်..
ပရိသတ္ႀကီးေရ အသက္ငယ္ေပမဲ့ အသံပါဝါအားေကာင္းေကာင္းနဲ႕ Myanmar Idol မွာ Winner ဆုရွင္ျဖစ္တဲ့ အက္စတာကိုေတာ့ မွတ္မိၾကအုံးမယ္ထင္ပါတယ္ေနာ္.. သူမကေတာ့ ဆုရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္းမွာလည္း ပရိသတ္နဲ႕အဆက္အသြယ္ျပတ္မသြား
ေစဘဲ သူမရဲ႕ သြားလာလႈပ္ရွားမႈေလးေတြကိုလည္း အဆက္မျပတ္တင္ေပးေနသူ ျဖစ္တာေၾကာင့္သူမကိုေတာ့ ပရိသတ္ႀကီးက ခုခ်ိန္ထိ ေမ့မသြားေသးတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္သူမကေတာ့ ၿပိဳင္ပြဲဝင္စဥ္က သူငယ္ခ်င္းေတြနဲ႕လည္း အၿမဲခ်စ္ခ်စ္ခင္ခင္ ရွိေနတတ္
ေၾကာင္းကိုလည္း ပုံေလးေတြနဲ႕ သက္ ေသျပေနတာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…အက္စတာကေတာ့ သီခ်င္းနဲ႕ပက္သက္လို႔လည္း တစ္ကိုယ္ေတာ္သီခ်င္းေခြ ထြက္ဖို႔လည္း ႀကိဳးစားေနရင္းကေနပဲ ျမန္မာျပည္မွာ အာဏာသိမ္းမႈျဖစ္သြားခဲံၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြ
အားလုံးလဲ ရပ္တန႔္သြားခဲ့ တာ ျဖစ္ပါတာ္။ သူမက အႏုပညာလမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ သီခ်င္းဘက္ကိုသာမက ေၾကာ္ျငာေတြကိုပါ လက္ခံရိုက္ကူးေနၿပီျဖစ္ပါတယ္ေနာ္….ဒီေန႕ေလးမွာေတာ့ အက္စတာက ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ သတို႔သမီးဝတ္စုံေလးနဲ႕ ပုံေလးကိုတင္လာခဲ့ၿပီး
” Photograper နဲ႕ Make up အစြမ္းေပါင္းလိုက္ေတာ့ ဒီလိုေလးထြက္လာတယ္ဆိုၿပီး ” တင္လာခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.သူမတင္လာခဲ့တဲ့ ပုံေလးေတြေအာက္မွာေတာ့ ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ ေကာမန႔္ေလးေတြနဲ႕ သူမကို
အားေပးၿပီးခ်စ္ေပးထားၾကပါတယ္ေနာ္…ခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့ အက္စတာရဲ႕ ပုံေလးေတြကို ၾကည့္ၿပီး ပရိသတ္ႀကီးလည္း ခ်စ္ေပးၾကပါအုံးေနာ္..
ဂျွန်ကို ကွယ်လွန်တာ ၇နှစ်ပြည့်အမှတ်တရ အနေနဲ့ ဘုရားဆင်းတုတော်တွေ မဲဖောက်ပေးမည့် မြသင်းချယ်
မြသင်းချယ်ကလဲဒီည7နာရီခေတ္တရာသူ KhitTayarThuPag မှဘုရားမဲ့အလှူကံစမ်းမဲ live လေးမှာဂျွန်ဂို ကိုချစ်တဲ့သူများဂျွန်ဂိုကိုသိခဲ့သူများဂျွန်ဂိုကိုမမေ့သေးသူများနဲ့ဂျွန်ဂိုကိုမသိသူများ အားလုံးမည်သူမဆိုဝင်ရောက်ကံစမ်းနိုင်ပါတယ်နော်ဆိုပြီးရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်၊စာဖတ်ပရိတ်သတ်ကြီးများအတွက်ပြန်လည်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်
ျမသင္းခ်ယ္ကလဲဒီည7နာရီေခတၱရာသူ KhitTayarThuPag မွဘုရားမဲ့အလႉကံစမ္းမဲ live ေလးမွာဂြၽန္ဂို ကိုခ်စ္တဲ့သူမ်ားဂြၽန္ဂိုကိုသိခဲ့သူမ်ားဂြၽန္ဂိုကိုမေမ့ေသးသူမ်ားနဲ႕ဂြၽန္ဂိုကိုမသိသူမ်ား အားလုံးမည္သူမဆိုဝင္ေရာက္ကံစမ္းနိုင္ပါတယ္ေနာ္ဆိုၿပီးေရးသားေဖာ္ျပထားပါတယ္၊စာဖတ္ပရိတ္သတ္ႀကီးမ်ားအတြက္ျပန္လည္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ေနာ္
ပရိတ်သတ်တွေကြားမှာ ရေပမ်းစားနေတဲ့ MRTV မှာ ဖျော်ဖြေခဲ့တဲ့ မယ်လိုဒီရဲ့ တေးသီချင်းသီဆိုမှု ဗီဒီယို
အကယ်ဒမီ မယ်လိုဒီကတော့ အနုပညာလောကမှာ ဆယ်စုနှစ်ကျော်တိုင်အောင် ရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေမှာ ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးတစ်ယောက်အနေနဲ့ ရပ်တည်ခဲ့ပြီး ခုချိန်ထိ ပရိသတ်များရဲ့ အချစ်ကို ပိုင်ဆိုင်ထားဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။မေမေ မယ်လိုဒီက မကြာသေးခင်
ကာလတုန်းက အိမ်ထောင်ရေးအဆင်မပြေဖြစ်သားလေးတစ်ယောက်နဲ့အတူ Single mother အဖြစ် ရပ်တည်ပြီး အေးချမ်းတဲ့ဘဝလေးကို ဖြတ်သန်းနေသူဖြစ်ပါတယ်။မေမေ မယ်လိုဒီက အနုပညာအလုပ်တွေကိုလည်း ပြန်လည်လုပ်ဆောင်နေပြီး ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေး
ကိုလဲ လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ပြီး ကျန်းမာရေးကို လိုက်စားတာကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်လေးကကျစ်လစ်ပြီး ရုပ်ရည်ကလည်း နုပျိုလှပနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ မယ်လိုဒီကတော့ လတ်တစ်လောမှာ အနုပညာအလုပ်တွေကို ရပ်နားထားရတာလည်း ဖြစ်တာကြောင့် သူမကိုယ်တိုင်ဆော့
ထားတဲ့ Tiktok လေးတွေနဲ့ အမြဲတင်ပေးဖြစ်ပါတယ်နော်.. တစ်ခါတစ်ရံမှာလည်း သူမရဲ့ လှုပ်ရှားမှုလေးတွေကို Instagram မှာ တင်ပေးပါသေးတယ်။ ဒီနေ့လေးမှာတော့ မယ်လိုဒီရဲ့ MRTV မှာသီချင်းဆိုကြတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုပြန့်နေတာဖြစ်ပါတယ်နော်…
ပရိသတ်ကြီးလည်း မယ်လိုဒီ ရဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင်ကို ကြည့်ပြီးအသံကောင်းလား မကောင်းလားဆိုတာလည်း ဝေဖန်ပေးခဲ့ကြပါအုံးနော်…
အကယ္ဒမီ မယ္လိုဒီကေတာ့ အႏုပညာေလာကမွာ ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္တိုင္ေအာင္ ႐ုပ္႐ွင္ကားႀကီးေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္မင္းသမီးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ရပ္တည္ခဲ့ၿပီး ခုခ်ိန္ထိ ပရိသတ္မ်ားရဲ႕ အခ်စ္ကို ပိုင္ဆိုင္ထားဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ေမေမ မယ္လိုဒီက မၾကာေသးခင္
ကာလတုန္းက အိမ္ေထာင္ေရးအဆင္မေျပျဖစ္သားေလးတစ္ေယာက္နဲ႔အတူ Single mother အျဖစ္ ရပ္တည္ၿပီး ေအးခ်မ္းတဲ့ဘဝေလးကို ျဖတ္သန္းေနသူျဖစ္ပါတယ္။ေမေမ မယ္လိုဒီက အႏုပညာအလုပ္ေတြကိုလည္း ျပန္လည္လုပ္ေဆာင္ေနၿပီး ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး
ကိုလဲ လုပ္ကိုင္ေနသူျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရးကို လိုက္စားတာေၾကာင့္ ခႏၶာကိုယ္ေလးကက်စ္လစ္ၿပီး ႐ုပ္ရည္ကလည္း ႏုပ်ိဳလွပေနတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ မယ္လိုဒီကေတာ့ လတ္တစ္ေလာမွာ အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ရပ္နားထားရတာလည္း ျဖစ္တာေၾကာင့္ သူမကိုယ္တိုင္ေဆာ့
ထားတဲ့ Tiktok ေလးေတြနဲ႔ အၿမဲတင္ေပးျဖစ္ပါတယ္ေနာ္.. တစ္ခါတစ္ရံမွာလည္း သူမရဲ႕ လႈပ္႐ွားမႈေလးေတြကို Instagram မွာ တင္ေပးပါေသးတယ္။ ဒီေန႔ေလးမွာေတာ့ မယ္လိုဒီရဲ႕ MRTV မွာသီခ်င္းဆိုၾကတဲ့ ဗီဒီယိုဖိုင္တစ္ခုျပန္႔ေနတာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္…
ပရိသတ္ႀကီးလည္း မယ္လိုဒီ ရဲ႕ ဗီဒီယိုဖိုင္ကို ၾကည့္ၿပီးအသံေကာင္းလား မေကာင္းလားဆိုတာလည္း ေဝဖန္ေပးခဲ့ၾကပါအုံးေနာ္…
မြန်မာပြည်သူတွေအတွက် ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ရေးသားလာတဲ့ ခရစ်စတီးနားခီရဲ့ စာလေးတစ်စောင်
မြန်မာ့ရုပ်ရှင်လောကမှာ သက်တမ်းနုပြီးတော့ ပရိသတ်တွေရဲ့ရင်ထဲကို ထိရောက်စွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့တာကတော့ ခီမောင်နှံတို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်…. ခရစ်စတီးနားခီကတော့ ခင်ပွန်းဖြစ်သူကို မင်းသားတင်ရိုက်ပြီးကိုယ်တိုင်က ဒါရိုက်တာလုပ်ပြီး ထက်မြက်တဲ့ အိမ်ရှင်မ
ကောင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ် ခရစ်စတီးနားခီနဲ့ ဇာဏ်ခီတို့ဇနီးမောင်နှံကတော့ ရုပ်ရှင်ကား အနည်းငယ်နဲ့တင် မတူကွဲပြားစွာ ထိုးမြောက်နိုင်တာကြောင့် သူတို့ရဲ့ ရုပ်ရှင်ကားတွေကို စောင့်မျှော်နေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ သူတို့ မိသားစုဟာ အာရှနိုင်ငံတခုမှာ
ရောက်ရှိနေပါတယ်။သရုပ်ဆောင်ဇဏ်ခီကတော့ ထိန်းသိမ်းခံရချိန် ကာလတုန်းက ဆေးကုသခွင့်မရတဲ့သူ့ရဲ့ နဂိုရောဂါအခံဖြစ်တဲ့ အရိုးအကြောရောဂါကပိုမိုဆိုးရွားခဲ့တာကြောင့် လက်ရှိမှာ အခုရောက်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံမှာ ဆေးကုသမှုခံယူနေရတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒီနေ့
လေးမှာတော့ ခရစ်စတီးနားခီက “မချမ်းသာသော်လည်းပျော်ပါသည်”ဘာမှမပြည့်စုံတဲ့နိုင်ငံမှာ အားလုံးဟာမချမ်း သာပေမယ့်(တချို့သူတွေကလွဲလို့)ပျော်အောင်နေကြရတယ်။ သူများနိုင်ငံနဲ့ယှဉ်ရင် ဘာအခွင့်အရေးမှ မရကြတာ နိုင်ငံအပြင်ထွက်တဲ့သူတိုင်းအသိ
ဒါပေမယ့်လည်း ကိုယ့်ရေ ကိုယ့်မြေမှာပဲ အေးချမ်းစွာနေချင်ကြတယ်…မိမိချွေးနဲစာနဲ့ရှာဖွေတည်ဆောက်ထားတဲ့အိမ်ကို စွန်ပြီး ပြေးရတဲ့ဒုက္ခဟာဘယ်လောက်ကြေကွဲစရာကောင်းလိုက်လဲ…အိမ်နဲ့ယာနဲ့ဘဝကနေ အိမ်ယာမရှိ၊ဘယ်သွားလို့ဘယ်နေရမှန်းမသိ
ဒီသောကတွေကုန်သွားမယ့်နေ့ ရောက်ကိုရောက်လာမှာပဲဆိုတာယုံကြည်ပါ။ အားတင်းထားပါ။Your pain is our pain too.” ဆိုပြီး သူမရဲ့ Instagram မှာရေးသားလာခဲ့ပါတယ်။ ပရိသတ်ကြီးလည်း ထန်တလန်မြို့လေးအတွက် ဆုတောင်းပေးကြပါအုံးနော်….
Source: christina -kyi
ျမန္မာ့႐ုပ္ရွင္ေလာကမွာ သက္တမ္းႏုၿပီးေတာ့ ပရိသတ္ေတြရဲ႕ရင္ထဲကို ထိေရာက္စြာဆြဲေဆာင္နိုင္ခဲ့တာကေတာ့ ခီေမာင္ႏွံတို႔ပဲ ျဖစ္ပါတယ္…. ခရစ္စတီးနားခီကေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို မင္းသားတင္ရိုက္ၿပီး ကိုယ္တိုင္က ဒါရိုက္တာလုပ္ၿပီး ထက္ျမက္တဲ့ အိမ္ရွင္မ
ေကာင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္. ခရစ္စတီးနားခီနဲ႕ ဇာဏ္ခီတို႔ဇနီးေမာင္ႏွံကေတာ့ ႐ုပ္ရွင္ကား အနည္းငယ္နဲ႕တင္ မတူကြဲျပားစြာ ထိုးေျမာက္နိုင္တာေၾကာင့္ သူတို႔ရဲ႕ ႐ုပ္ရွင္ကားေတြကို ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။လက္ရွိမွာေတာ့ သူတို႔ မိသားစုဟာ အာရွနိုင္ငံတခုမွာ
ေရာက္ရွိေနပါတယ္။ သ႐ုပ္ေဆာင္ဇဏ္ခီကေတာ့ ထိန္းသိမ္းခံရခ်ိန္ ကာလတုန္းက ေဆးကုသခြင့္မရတဲ့သူ႕ရဲ႕ နဂိုေရာဂါအခံျဖစ္တဲ့ အရိုးအေၾကာေရာဂါကပိုမိုဆိုး႐ြားခဲ့တာေၾကာင့္ လက္ရွိမွာ အခုေရာက္ရွိေနတဲ့နိုင္ငံမွာ ေဆးကုသမႈခံယူေနရတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ ဒီေန႕
ေလးမွာေတာ့ ခရစ္စတီးနားခီက ” “မခ်မ္းသာေသာ္လည္းေပ်ာ္ပါသည္”ဘာမွမျပည့္စုံတဲ့နိုင္ငံမွာ အားလုံးဟာမခ်မ္း သာေပမယ့္(တခ်ိဳ႕သူေတြကလြဲလို႔)ေပ်ာ္ေအာင္ေနၾကရတယ္။ သူမ်ားနိုင္ငံနဲ႕ယွဥ္ရင္ ဘာအခြင့္အေရးမွ မရၾကတာ နိုင္ငံအျပင္ထြက္တဲ့သူတိုင္းအသိ
ဒါေပမယ့္လည္း ကိုယ့္ေရ ကိုယ့္ေျမမွာပဲ ေအးခ်မ္းစြာေနခ်င္ၾကတယ္…မိမိေခြၽးနဲစာနဲ႕ရွာေဖြတည္ေဆာက္ထားတဲ့အိမ္ကို စြန္ၿပီး ေျပးရတဲ့ဒုကၡဟာဘယ္ေလာက္ေၾကကြဲစရာေကာင္းလိုက္လဲ…အိမ္နဲ႕ယာနဲ႕ဘဝကေန အိမ္ယာမရွိ၊ဘယ္သြားလို႔ဘယ္ေနရမွန္းမသိ
ဒီေသာကေတြကုန္သြားမယ့္ေန႕ ေရာက္ကိုေရာက္လာမွာပဲဆိုတာယုံၾကည္ပါ။ အားတင္းထားပါ။Your pain is our pain too.” ဆိုၿပီး သူမရဲ႕ Instagram မွာေရးသားလာခဲ့ပါတယ္။ ပရိသတ္ႀကီးလည္း ထန္တလန္ၿမိဳ႕ေလးအတြက္ ဆုေတာင္းေပးၾကပါအုံးေနာ္….
ပရိသတ္ေတြရဲ႕ အခ်စ္ကို အခိုင္အမာ ရ႐ွိထားတဲ့ မင္းသမီးေခ်ာေလး နန္းျမတ္ၿဖိဳးသင္းက ဇာတ္ကားေတြ႐ိုက္ကူးခဲ့သလို ေတးသီခ်င္းေတြလည္း သီဆိုၿပီး အႏုပညာအလုပ္ေတြကို ႏွစ္အေတာ္ၾကာေအာင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္ ။ ပရိသတ္ေတြကလည္း သူမကို ခ်စ္ၾကလို႔ ယေန႔အထိ အားေပးခ်စ္ခင္ေနၾကဆဲပါ ။
လတ္တေလာမွာေတာ့ ကိုဗစ္ကပ္ေရာဂါဆိုးႀကီးနဲ႔ ႐ုတ္တရက္ ခြဲခြာသြားတဲ့ ခင္ပြန္းအတြက္ နန္းျမတ္က ေျဖမဆည္ႏိုင္ေအာင္ ဝမ္းနည္းေနရတာပါ ။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူ ေလာကႀကီးမွာ မ႐ွိေတာ့ေပမယ့္လည္း သားနဲ႔သမီးကိုအစစအရာရာ ဂ႐ုစိုက္ရင္း ေနထိုင္သြားမွာျဖစ္ေၾကာင္း ကိုလည္း အၿမဲေျပာေလ့႐ွိတာေၾကာင့္ အားလုံးက ေလးစားေနၾကတာပါ ။
အခုလည္း ခင္ပြန္းျဖစ္သူနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သူမ ဝမ္းနည္း စိတ္မေကာင္း ျဖစ္ေနခ်ိန္တိုင္း သားျဖစ္သူက သိတတ္စြာ အားေပးစကားေတြေျပာလာပုံကို ခုလိုေဖာ္ျပလာပါတယ္ ။ ” အရမ္းသိတတ္လိမၼာတဲ့သားေလးအေမငိုရင္ ေဖေဖ့ကိုလြမ္းလို႔လားေမေမလို႔ေမးတတ္တယ္ ပီးရင္မငို႔နဲ႔ေနာ္ တိတ္တိတ္လို႔လဲေခ်ာ့တတ္တယ္ ညတိုင္းလဲဂ်က္ဂ်က္ေဖေဖေရာလို႔ေမးတတ္တယ္ ေဖေဖကေနမေကာင္းလို႔ျပန္လာလို႔မရေတာ့ဘူးလို႔ေျပာရင္ ေဖေဖ့ကိေဆး႐ုံကားႀကီးနဲ႔ေခၚသြားတာလားေမေမလို႔ျပန္ေျပာတတ္တယ္ ဒါကညတိုင္းေျပာေနက် မေန႔ညကေတာ့ထူးထူးဆန္းဆန္းေျပာတယ္ ေမေမ! ေဖေဖနဲ႔လိုက္မသြားနဲ႔ေနာ္ ဂ်က္ဂ်က္နဲ႔ေနခဲ့ေနာ္လို႔ေျပာ႐ွာတယ္ ရင္ထဲမွာေျပာမျပတတ္ေအာင္ဝမ္းနည္းခံစားရတယ္ တဖက္မွာလဲမျပည့္စုံႏိုင္ဖူးဆိုတာသိေပမယ့္သူ႕အေဖ႐ွိတုန္းကလိုျပည့္စုံေအာင္ႀကိဳးစားပီးထားရမယ္ ငါက်န္းမာမွအသက္႐ွည္မွျဖစ္မယ္လို႔စဥ္းစားမိတယ္ ေမေမ့သားႀကီးေလး သန္မာၾကံ့ခိုင္တဲ့သားေလးျဖစ္ပါေစသားရယ္” ေရးသားထားရာ ပရိသတ္ႀကီးအတြက္ ျပန္လည္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် ဓာတ်ပုံတွေ အမြဲတင်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းအရင်း ကို ရှင်းပြလာတဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်
သရုပ်ဆောင်နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ကတော့ဇာတ်ကားတွေမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်း သရုပ်ဆောင်ကောင်းတာကြောင့်ပရိတ်သတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် ကတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ သရုပ်ဆောင်ကောင်းရုံသာမကဈေး ရောင်းတဲ့နေရာမှာလည်း ထူးချွန်လွန်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ပရိသတ်တွေကလည်း သူမ Live လွှင့်ပြီး ဈေးရောင်းတဲ့ပုံစံတွေကိုချစ်ကြတဲ့ အတွက်ဘာပစ္စည်းပဲရောင်းရောင်း အားပေးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာအလုပ်တွေမလုပ်ရဘဲနားနေရပေမယ့် Live လွှင့်ကာဈေးရောင်းတဲ့အလုပ်လေးကိုလက်ခံလုပ်ကိုင်လာခဲ့တာပေါက်မြောက်ကာ အဆင်ပြေနေပေမယ့် မနာလိုမှုတွေနဲ့ တိုက်ခိုက်ခံ နေရပါတယ်။
နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ကတော့သူမနဲ့ အတူတူ အနုပညာလောကထဲကသရုပ်ဆော င်ကိုဘင်းနဲ့အိမ်ထောင်ကျပြီးချစ်စရာကောင်းတဲ့သားလေးတစ်ဦး ကိုပိုင်ဆိုင် ထားပါတယ်။နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ကကိုယ်ဝန် ဆောင်နေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုအမြဲတင်နေရတဲ့ အကြောင်းအရင်းပရိသတ်ကြီးသိအောင် အခုလိုပဲရှင်းပြထားပါတယ်။
နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ်ကလက်ရှိမှာ ကိုယ်ဝန် ဆောင်ထားရပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ထားရပေမယ့်လည်း သူမဟာ live လွှင့်ပြီးစျေးရောင်းနေ ဆဲပါပဲ။ ဒီရက်ပိုင်းမှာ သူမကကိုယ်ဝန်ဆောင် အလှဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီး ဖေ့ဘွတ်မှာ မျှဝေထားတာ ကြောင့် အချို့မနာလိုသူတွေရဲ့ ဝေဖန်တိုက် ခိုက်မှု့ကို ခံနေရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ တွေအ မြဲမျှဝေရတဲ့အ ကြောင်းအ ရင်းကိုလဲ ပရိသတ်သိအောင် ” ဗိုက်ကနောက်တစ်ခါမကြီးနို င်တော့လို့(သားကြောဖြတ်မှာမို့)ဒီတစ်ခါ အမှတ်တရပုံလေးတွေ ရိုက်တာပါ…ရှေ့ကိုယ်ဝန်တုန်းက မျက်နှာရင့်ထော် အလှအပလည်း လုပ်ချင်စိတ်မ ရှိလို့ မရိုက်ခဲ့ရဘူးးး ဒီတစ်ခါပဲရိုက်ဖို့ အခွင့်အရေးရှိလို့ ရိုက်ပီးပုံတင်နေတာပါသည်း ခံပေးကြပါနော် ကိုယ့်အကောင့် ထဲက လူတွေကိုပဲ သီးသန့်တော င်းပန်တာပါ… ”လို့ သူမရဲ့လူမှု့ကွန်ယက်စာမျက်နှာ မှာ အသိပေးပြောကြား ထားပါတယ်။
ပရိသတ်ကြီးရေ …မကြာမှီမွေးဖွားတော့မဲ့ နှိုင်းရှင်မြင့်မိုရ် ရဲ့ကလေးလေးအတွက် ဆုတောင်းစကား လေးတွေ ပြောပေးခဲ့ပါအုန်းနော်
သ႐ုပ္ေဆာင္ႏွိုင္းရွင္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့ဇာတ္ကားေတြမွာပါဝင္သ႐ုပ္ေဆာင္ရင္း သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္းတာေၾကာင့္ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕အားေပးမႈကိုအခိုင္အမာရရွိထားတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ႏွိုင္းရွင္ျမင့္မိုရ္ ကေတာ့႐ုပ္ရွင္ဇာတ္ကားေတြထဲမွာ သ႐ုပ္ေဆာင္ေကာင္း႐ုံသာမက ေဈး ေရာင္းတဲ့ေနရာမွာလည္း ထူးခြၽန္လြန္းသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
ပရိသတ္ေတြကလည္း သူမ Live လႊင့္ၿပီး ေဈးေရာင္းတဲ့ပုံစံေတြကိုခ်စ္ၾကတဲ့ အ တြက္ဘာပစၥည္းပဲေရာင္းေရာင္း အားေပးေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။အႏုပညာ အလုပ္ေတြမလုပ္ရဘဲနားေနရေပမယ့္ Live လႊင့္ကာေဈးေရာင္းတဲ့အလုပ္ေလးကိုလက္ခံလုပ္ကိုင္လာခဲ့တာေပါက္ေျမာက္ကာ အဆင္ေျပေနေပမယ့္ မနာလိုမႈေတြနဲ႕ တိုက္ခိုက္ခံ ေနရပါတယ္။
ႏွိုင္းရွင္ျမင့္မိုရ္ကေတာ့သူမနဲ႕ အတူတူ အႏုပညာေလာကထဲကသ႐ုပ္ေဆာ င္ကိုဘင္းနဲ႕အိမ္ေထာင္က်ၿပီးခ်စ္စရာေကာင္းတဲ့သားေလးတစ္ဦး ကိုပိုင္ဆိုင္ ထားပါတယ္။ႏွိုင္းရွင္ျမင့္မိုရ္ကကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ေနတဲ့ဓာတ္ပုံေတြကိုအၿမဲတင္ေနရတဲ့ အေၾကာင္းအရင္းပရိသတ္ႀကီးသိ ေအာင္ အခုလိုပဲရွင္းျပထားပါတယ္။
ႏွိုင္းရွင္ျမင့္မိုရ္ကလက္ရွိမွာ ကိုယ္ဝန္ ေဆာင္ထားရပါတယ္။ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ ထားရေပမယ့္လည္း သူမဟာ live လႊင့္ၿပီးေစ်းေရာင္းေန ဆဲပါပဲ။ ဒီရက္ပိုင္းမွာ သူမကကိုယ္ဝန္ေဆာင္ အလွဓာတ္ပုံေတြရိုက္ၿပီး ေဖ့ဘြတ္မွာ မွ်ေဝထားတာ ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕မနာလိုသူေတြရဲ႕ ေဝဖန္တိုက္ ခိုက္မႈ႕ကို ခံေနရပါတယ္။
ဓာတ္ပုံ ေတြအ ၿမဲမွ်ေဝရတဲ့အ ေၾကာင္းအ ရင္းကိုလဲ ပရိသတ္သိေအာင္ ” ဗိုက္က ေနာက္တ စ္ခါမႀကီးနို င္ေတာ့လို႔(သားေၾကာျဖတ္မွာမို႔) ဒီတစ္ခါ အမွတ္တရပုံေလးေတြ ရိုက္တာပါ…ေရွ႕ကိုယ္ဝန္တုန္းက မ်က္ႏွာ ရင့္ေထာ္ အလွအပလည္း လုပ္ခ်င္စိတ္မ ရွိလို႔ မရိုက္ခဲ့ရဘူးးး ဒီတစ္ခါပဲရိုက္ဖို႔ အခြင့္အေရးရွိလို႔ ရိုက္ပီးပုံတင္ ေနတာပါသည္း ခံေပးၾကပါေနာ္ ကိုယ့္အေကာင့္ ထဲက လူေတြကိုပဲ သီးသန႔္ေတာ င္းပန္တာပါ… ” လို႔ သူမရဲ႕လူမႈ႕ကြန္ယ က္စာမ်က္ႏွာ မွာ အသိေပးေျပာၾကား ထားပါတယ္။
ပရိသတ္ႀကီးေရ …မၾကာမွီေမြးဖြားေတာ့မဲ့ ႏွိုင္းရွင္ျမင့္မိုရ္ ရဲ႕ကေလးေလးအတြက္ ဆုေတာင္းစကား ေလးေတြ ေျပာေပးခဲ့ပါအုန္းေနာ္
မွေးရပ်ဇာတိဖြစ်တဲ့ ထန်တလန်မြို့လေး အတွက် စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀၀ မတည်လှူဒါန်းလိုက်တဲ့ ဒေးဗစ်လိုင်
SAC ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေေ ကြာင့်မီးလောင်ပျက်စီးသွားရတဲ့ ချင်းပြ ည်နယ်၊ထန်တလန်မို့အတွက်ချင်းအဆို တော်ဒေးဗစ်လိုင်က စင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀၀ မ,တည်လှူဒါန်းတယ်လို့သိရပါတယ်။
ထန်တလန်မြို့ကစစ်‌ေဘးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက်ချင်းအဆိုေတာ် ဒေးဗစ်လိုင်ကစင်ကာပူဒေါ်လာ ၃၀၀၀ မ,တည်လှူဒါန်းပြီးသူနဲ့အတူ အလှူငွေထည့်ဝင်ကာထန်တလ န်တွက်ထောက်ပံ့ကြဖို့ နှိုးဆော်တိုက်တွန်းတာေတွလည်း ရှိနေပါတယ်။
ချင်းပြည်နယ် မှာ တိုက်ပွဲေ တွကြောင့် စစ်ဘေးရှောင်နေရတဲ့ ဒေသခံပြ ည်သူတွေထောင်ချီမကရှိေ နပြီး အောက် တိုဘာ ၂၉ ရက်နေ့က SAC ရဲ့ လက်နက် ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ထန်တလန်မြို့မှာ ဘုရားကျောင်း ၂ကျောင်း အပါအဝင် နေအိမ် ၁၆၀ ကျော် မီးလောင်ပြီး ဆုံးရှုံးလိုက်ရပါတယ်။
SAC ရဲ႕လက္နက္ႀကီးပစ္ခတ္မႈေတြေ ၾကာင့္မီးေလာင္ပ်က္စီးသြားရတဲ့ ခ်င္းျပ ည္နယ္၊ထန္တလန္မို႔အတြက္ခ်င္းအဆို ေတာ္ေဒးဗစ္လိုင္က စင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀၀၀ မ,တည္လႉဒါန္းတယ္လို႔သိရပါတယ္။
ထန္တလန္ၿမိဳ႕ကစစ္‌ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ခ်င္းအဆိုေတာ္ ေဒးဗစ္လိုင္ကစင္ကာပူေဒၚလာ ၃၀၀၀ မ,တည္လႉဒါန္းၿပီးသူနဲ႕အတူ အလႉေငြထည့္ဝင္ကာထန္တလ န္တြက္ေထာက္ပံ့ၾကဖို႔ ႏွိုးေဆာ္တိုက္တြန္းတာေတြလည္း ရွိေနပါတယ္။
ခ်င္းျပည္နယ္ မွာ တိုက္ပြဲေ တြေၾကာင့္ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရတဲ့ ေဒသခံျပ ည္သူေတြေထာင္ခ်ီမကရွိေ နၿပီး ေအာက္ တိုဘာ ၂၉ ရက္ေန႕က SAC ရဲ႕ လက္နက္ ႀကီးပစ္ခတ္မႈေၾကာင့္ထန္တလန္ၿမိဳ႕မွာ ဘုရားေက်ာင္း ၂ေက်ာင္း အပါအဝင္ ေနအိမ္ ၁၆၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ၿပီး ဆုံးရႈံးလိုက္ရပါတယ္။
လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ ဝယ်ထားမိရင် ကိုယ့်အမည်နဲ့ ပုံစံ (၇) ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
လယ်ယာမြေကို အရပ်စာချုပ်နဲ့ ဝယ်ထားမိလို့ ကိုယ့်အမည်နဲ့ ပုံစံ ၇ ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ၊ ပုံစံ ၇ ထုတ်မရဘူးလို့လဲ ပြောနေပါတယ်။ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ မေးလာပါတယ်။
ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ မြေပြင်လက်ရှိ အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီး ကွဲပြားနိုင်ပါတယ်။
၁။ ၂၀၁၂ မတိုင်မီ ဝယ်ယူထားပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက်သာ သုံးနေတဲ့မြေ။
၂။ ၂၀၁၂ နောက်ပိုင်းမှဝယ်ယူထားပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက်ပဲ သုံးနေတဲ့မြေ။
၃။ ဘယ်အချိန်ကပဲဝယ်ဝယ်၊ဝယ်ယူထားတဲ့မြေကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက်သုံးနေတာမဟုတ်ပဲ အခြားနည်းသုံးနေတဲ့မြေ(အိမ် ၊ အဆောက်အဦးစသည်ဖြင့်သုံး)
နံပတ် (၁) နဲ့ နံပတ် (၂) လိုကိစ္စမျိုးမှာ ပုံစံ ၇ မရသေးတဲ့လယ်ယာမြေ၊ တနည်းအား ဖြင့် ပုံစံ ၇ မလျှောက်ထားရသေးတဲ့ လယ်ယာမြေကို ဝယ်ယူထားတဲ့သူတွေ အနေနဲ့ သိရှိရမှာက
(က) ဝယ်ထားတဲ့မြေဟာလယ်ယာမြေအဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ မြေအမျိုးအစားနှင့် ထိုမြေကိုကွင်းတိုင်းတာ မြေပုံထုတ်ပြီးတဲ့မြေ ဖြစ်နေဖို့လိုပါတယ်။
ဆိုလိုတာကဝယ်ယူထားတဲ့မြေက လယ်ယာမြေ အမျိုးအစား ဖြစ်ရမယ်အခြားသောမြေရိုင်း၊စားကျက်မြေ စသည်ဖြင့် မဟုတ်ရဘူး။မြေစာရင်းဌာနမှာမြေပုံ မြေတိုင်းလုပ်ပြီးရှိနေတဲ့ မြေမှတ်တမ်းရှိရပါမယ်။
(ခ) ထိုမြေကို လက်ရောက်လွှဲပြောင်းရယူထားပြီး လက်ရှိလက်ငုတ်အဖြစ်လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ရပါမယ်။ ဝယ်ပြီးထဲက မြေကိုလက်ရောက်ယူပြီးတဲ့မြေ၊ လက်ရှိလည်းစိုက်ပျိုးနေသူ ဖြစ်ရမယ်။
ဒီနှစ်ချက် ပြည့်စုံမှသာ လယ်ယာမြေဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၊ (က)(၁ နဲ့ ၂)ပါပြဌာန်းချက်အရလက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသူအဖြစ် လျှောက် ထားခွင့် ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၂ မတိုင်မီ ဝယ်ယူထားပြီး စိုက်ပျိုးရေးအတွက်သာ သုံးနေတဲ့မြေဆိုရင်တော့ လျောက်ရတာပိုလွယ်ကူနိုင်ပါတယ်။
ဥပဒေမှာဆိုထားတာက “ပုဒ်မ ၆။ မြို့နယ်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့သည်ဤဥပဒေအာဏာတည်သည့်နေ့ရက်တွင် တည်ရှိနေသောလယ်ယာမြေများနှင့်
စပ်လျဉ်း၍အောက်ပါလူပုဂ္ဂိုလ် သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်းအား သက်ဆိုင်ရာခရိုင်လယ်ယာမြေ စီမံခန့်ခွဲမှုအဖွဲ့၏ သဘောတူ ညီချက်ဖြင့် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနရုံးတွင်
သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီမှတ်ပုံတင်ကြေး ပေးဆောင်စေ၍ မှတ်ပုံတင်ပြီးလယ်ယာမြေလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုလက်မှတ်ထုတ်ပေးရမည်-
(၁) လယ်ယာမြေကိုအသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသောထိုအိမ်ထောင်စုသည်တောင်သူ လယ်သမား အိမ်ထောင်သားစု သို့မဟုတ် အိမ်ထောင်သားစုဝင် ဖြစ်ရမည်။
(၂) လယ်ယာမြေကို အသုံးပြုခွင့်ရရှိထားသော ထိုအိမ်ထောင်သားစုအကြီးအကဲသို့မဟုတ်ထိုအိမ်ထောင်သားစုတွင် ပါဝင်သူတစ်ဦး သို့မဟုတ်
အုပ်ထိန်းသူသည်ဤဥပဒေပြဋ္ဌာန်းအတည်မပြုမီတည်ဆဲမြေယာ ဥပဒေများနှင့်အညီတရားဝင်လက်ရှိ လက်ငုတ် လုပ်ကိုင်နေသူ ဖြစ်ရမည်။” လို့ ဆိုထားပါတယ်။
၂၀၁၂ ဥပဒေ ပြဌာန်းပြီးမှဝယ်ယူခဲ့ရင်လည်း လက်ရှိလက်ငုတ် လုပ်နေသူ၊ မြေအငြင်းပွားမနေသူ၊ ကန့်ကွက်လွှာခေါ်ချိန်မှာကန့်ကွက်ခြင်းမရှိသူဆိုရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ရနိုင်ပါတယ်။
ကာယကံရှင်အနေနဲ့ ရပ်ကျေး လယ်စီထံမှ ပုံစံ (၁) တောင်းခံ ဖြည့်သွင်းပြီး ရပ်ကျေးလယ်စီမှတဆင့် မြို့နယ်ဦးစီးဌာနသို့ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။
မြေပေါ်အမှန် လုပ်ကိုင်နေသူဖြစ်ကြောင်း ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့် လယ်နီးချင်း သက်သေ ၂ ဦးရဲ့ ထောက်ခံချက် ပါရှိရပါမယ်။
ဒီလို လျှောက်ထားမှုကိုရပ်ကျေး လယ်စီနဲ့ မြေစာရင်းဌာနမှ ကန့်ကွက်လွှာခေါ်ယူခြင်း စိစစ်ခြင်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးရင် အမှုတွဲကိုလုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးဖို့ သင့်မသင့် သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ မြို့နယ်လယ်စီကိုတင်ပြပေးပါမည်။ မြို့နယ်လယ်စီမှာဆက်လက်စိစစ်ပြီး သဘောထားမှတ်ချက်နှင့်အတူ ခရိုင်လယ်စီသို့ တင်ပြပါမည်။
ခရိုင်လယ်စီက အမှုတွဲလက်ခံ ရရှိတဲ့အခါ ထပ်မံ စိစစ်ပြီး လျှောက်ထားမှုကို ခွင့်ပြုကြောင်းသို့မဟုတ်ငြင်းပါယ်ကြောင်းဆုံးဖြတ်ပြီး မြို့နယ်မြေစာရင်းဌာနသို့ အကြောင်းကြားပါမယ်။
မြို့နယ်မြေစာရင်းဌာနကခရိုင်လယ်စီမှလုပ်ပိုင်ခွင့်ပြုကြောင်း အကြောင်းကြားစာ ရရှိရင်လျှောက်ထားသူကို မှတ်ပုံတင်ကြေး ၅၀ဝိ ပေးသွင်းခြင်း၊
မှတ်ပုံတင်စာရင်း ပုံစံ ၅ တွင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းများ ဆောင် ရွက်ပြီး မြို့နယ်လယ်စီသို့တင်ပြ၍ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင် ခွင့်ပြုလက်မှတ်ပုံစံ ၇ ထုတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့နံပတ် (၁) အချက်နဲ့ နံပတ် (၂) အချက်ပါ လယ်ယာမြေကို လုပ် ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ၇ ရနိုင်ပါမယ်။
နံပတ် ၃ အချက်ပါ ဝယ်ယူထားတဲ့မြေက လယ်ယာမြေအမျိုးအစားတော့ ဖြစ်တယ်၊မြေကို စိုက်ပျိုးရေးအတွက် သုံးနေတာမဟုတ်ပဲအခြားနည်းသုံး(အိမ် ၊ အဆောက်အဦး စသည်ဖြင့်သုံး)နေတယ်ဆိုရင်တော့ ပုံစံ ၇ ရမှာထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီမြေကလယ်ယာမြေတော့ဟုတ်တယ် သို့သော် စိုက်ပျိုးရေးအတွက် မသုံးဘူး ဆိုတာမျိုး ဖြစ်နေတာပါ။
ဒီလိုအခြေအနေမှာတော့ လယ်ယာမြေ လုပ်ပိုင်ခွင့် ပုံစံ ၇ လျောက်ထားခြင်းထက် လယ်ယာမြေကိုအခြားနည်းသုံးစွဲခွင့် လယ ၃၀ လျောက်ထားခြင်းကိုသာ
တိုက်ရိုက်တင်ပြသင့်ပါတယ်။လယ်ယာမြေ နည်းဥပဒေအရ အခြားနည်းသုံးစွဲခွင့်ပြုရာမှာ ပုံစံ ၇ မရခဲ့ရင် ဘာကြောင့် မရခဲ့သလဲဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာက စီစစ်ကြပါတယ်။
လက်ရှိမြေအသုံးချထားမှု အခြေအနေ၊အခြားနည်းသုံးမှု၊ ဘယ်အချိန်ထဲက သုံးနေတာ စသည်ဖြင့် စစ်ဆေးတွေ့ရှိရင် အခြားနည်းသုံးဖို့ လယ-၃၀ ခွင့်ပြုနိုင်ပါတယ်။ကူးယူဖော်ပြပါသည်။
Credit – ဥပဒေရေးရာ
BTS သီချင်းနဲ့ ကခဲ့ကြလို့ မြောက်ကိုးရီးယား စစ်သား သုံးဦး နိုင်ငံရေးအကျဉ်း ထောင်စခန်းသို့ အပို့ခံရ
ကေပေါ့ နာမည်ကြီး အဆိုတော်အဖွဲ့ BTS ရဲ့ သီချင်းနဲ့ ကခဲ့တာကြောင့် မြောက်ကိုးရီးယား စစ်သား ၃ ဦးကို နိုင်ငံရေးအကျဉ်း စခန်းသို့ ပို့ပစ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ သြဂုတ် ၅ က်နေ့တုန်းက ကိုးရီးယားပြည်သူ့ စစ်တပ်လေကြောင်းနဲ့ လေကြောင်းတိုက်ခိုက် ညွှန်ကြားရေး စစ်တပ်က စစ်သား ၃ ဦးတို့ဟာကမ္ဘာ့နာမည်ကြီးကိုးရီးယားပေါ့ အမျိုးသားအဖွဲ့ BTS ရဲ့ နာမည်အကြီးဆုံး သီချင်း Blood,Sweat,& Tear နဲ့ အကတင်ဆက်မှုတွေ လုပ်ခဲ့တယ်လို့ စွပ်စွဲချက်နဲ့ ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရကြောင်း နေ့စဉ် အန်ကေ သတင်းစာက ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
အသက် ၂၀ အရွယ်ရှိကြတဲ့စစ်သားသုံးဦးတို့ဟာ ပဲ့ဒူတောင် တန်းသို့ ခရီးစဉ်မှာပြုံးယမ်းရထားနဲ့ ဟေဆန် သို့လမ်းကြောင်းဦးတည်လာခဲ့ကြစဉ်သူတို့ရထားဟာဓာတ်အားပြတ်တောက်မှုကြောင့်တောင်ပိုင်းဟန်မ်ဂျောင်းပြည်နယ်၊ ဆော့ခု ဘူတာမှာ ရပ်တန့်ထားခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဲ့ဒီရထားရပ်တန့်ထား ချိန် အနားယူစောင့်ဆိုင်းနေကြတဲ့စစ်သားသုံးယောက်တို့က ကေပေါ့သီချင်းနဲ့ ကခဲ့ကြတာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်လဲ အဆိုပါ စစ်သား သုံးဦးတို့ကို ချက်ချင်းဆိုသလို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့တယ်လို့အဆင့်မြင့် ရာထူးရ အကြီးအကဲ ၂ ဦးက ဆိုပါတယ်။
မျိုးချစ်အာဇာနည်တွေရဲ့ တော်လှန်ရေးစိတ်ဓာတ်ကို လေ့လာဖို့ ပဲ့ဒူ တောင်တန်းသို့ ခရီးနှင်နေစဉ် ဒီလိုမျိုး အကျင့်ပျက်အကကိုအတုယူကာ ပြုမူခဲ့လို့ လူငယ်တွေကို လုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေက ဆွဲထုတ်ပြီး ဖမ်းဆီးခေါ် ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ နေ့စဉ် အန်ကေသတင်းက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
အေဂျင်စီအတွင်း အထူးဌာနတစ်ခု ရှိနေတယ်လို့ သိရပြီး အရာရှိတွေဟာ သူတို့တွေရဲ့ တာဝန်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ နိုင်ငံခြား ဗွီဒီယိုတွေကို အပတ်စဉ် ၃ နာရီကြာ ကြည့်ရှုရတဲ့ တာဝန်တွေမှာ ဒီလိုမျိုး BTS ရဲ့ အကနဲ့ သီချင်းတွေက အသိမှတ်ပြုနိုင်ဖွယ်ရာရှိတယ်လို့ သတင်းက ရေးသားဖော်ပြထားပါတယ်။
Credit Myanmar Platform